एल.आर.आइ. स्कुलका विद्यार्थीले गरे कोरिया भ्रमण – Nepal Parikrama
एल.आर.आइ. स्कुलका विद्यार्थीले गरे कोरिया भ्रमण
एलआरआइ विद्यालयका २४ विद्यार्थी र चार अधिकारीहरुले दक्षिण कोरीयाको भ्रमण गरेका छन् । १० दिने भ्रमणमा ९ जना छात्रा र १५ जना छात्रले सहभागिता जनाएका थिए । कक्षा ६ देखि १० का विद्यार्थीहरुको सहभागिता रहेका भ्रमणमा चार जना विद्यालयका अधिकारी पनि सम्मिलित थिए । एलआरआइ स्कुलले दक्षिण कोरीयाको चार वटा स्कुलसंग मितेरी साइनो लगाएको छ । जस अन्तर्गत यस अघि दक्षिण कोरीयबाट पनि ३४ जना विद्यार्थी र ६ जना शिक्षक आएका थिए । विदेशको शिक्षा लगायत विकासका विषयमा नेपाली विद्यार्थीहरले पनि केहि ज्ञान हासिल गर्न सकुन भन्ने उद्देश्यले यस्ता कार्यक्रमको आयोजना बेला बेलामा गर्ने गरिएको स्कुलका संस्थापक शिवराज पन्तको भनाई छ । दे
शका बालबालिका भोलीका कर्णधार भन्ने तर त्यो अनुरुपको बाटो नदेखाउने हो भने यस्ता कुरा नारामा मात्रै सिमित रहने भएकोले आफुहरुले बालबालिकाका लागि एउटा सानो प्रयास गरेको स्कुलका विद्यालय व्यवस्थापन समितिकी अध्यक्ष यसरेखा पन्तले बताउनु भयो । विश्वपरिवेशको शिक्षाका बारेमा पनि उत्तिकै मात्रामा ध्यान दिन सकेको खण्डमा नेपाली विद्यार्थीहरुले पनि धेरै कुरा जान्ने मौका पाउँछन् । हाम्रा बालबालिका पनि ग्लोबल नागरिक बन्न सक्ने प्रसस्त संभावना छ । अन्तर्राष्ट्रिय पाठ्यक्रम अध्ययनबाट विद्यार्थीहरुले नयाँ कुरा हासिल गर्न पाउँनेछन् ।
यहि विषयलाई मध्यनजर गरेर एलआरआइ स्कुलले विद्यार्थीहरुका लागि वैदेशिक शैक्षिक भ्रमण गर्दै आएको छ । दक्षिण कोरियाको विकास अचम्मको भएको र यहाँका सडक संरचना निकै सुन्दर रहेका तथा विद्यार्थीहरुका लागि अध्ययनमा धेरै कुराको सुविधा उपलब्ध रहेका भ्रमणमा संलग्न विद्यार्थीहरु बताउँछन् । त्याहाँका विद्यार्थीहरुले आत्मियता फरक खालको अनुभव मिलेका तथा अध्ययनसंगै रमाइलो गर्ने तरिका फरक लागेको बताए । उनिहरुले अध्ययनमा प्रविधिको प्रयोगलाई निकै उपयोग गर्ने गरेको विद्यार्थीहरुको भनाई थियो । यो भ्रमणले त्याहाँको संस्कृति तथा इतिहासलाई नजिकबाट बुझ्ने मौका मिलेको उनीहरुको भनाई थियो । दक्षिण कोरियाको विकास देखेर विद्यार्थीहरुले अनौठो मानेका छन् । नेपालको विकास किन अरु राष्ट्रजस्तो हुन सकेन भन्ने विषयले उनिहरुको चासो बढेको छ ।
विद्यार्थीहरुको यो भ्रमणले पक्कै पनि उनीहरुको जिवनमा एउटा नयाँ आयाम त श्रृजना गरेका छ नै त्याहाँको विकासलाई आफ्नो सपना बुनेका छन् । विदेशको विकास अनि देशको अवस्थालाई विद्यार्थीहरुले तुलना गरेका छन् । शिक्षा नै देशको ऐना हो । प्रभावकारी शिक्षा तथा अनुशासनलाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने विद्यार्थीहरुको बुझाई छ ।
Published On: २४ जेष्ठ २०७५, बिहीबार १४:१४ 1144पटक हेरिएको